SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | Archive | WARARKA SOOMAALIYA
Home » Archives by category » WARARKA SOOMAALIYA
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa si rasmi ah uga jawaabay warbixin ay dhowaan diyaariyeen guddi qiimayn ah oo ka socday Midowga Afrika, taas oo looga hadlay mustaqbalka hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa aad u dhibsatay warbixintaas oo ku talisay in afar qaab midkood uu yeesho hawlgalka […]
Comments Off on DF oo jawaab rasmi ah ka bixisay warbixintii xasaasiga aheyd ee Midowga Afrika
Madaxweynaha Jamhuuriyadda goonni isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa shaaciyay in maalinta Talaadada ah ee soo aaddan uu qabsoomi doono kulanka ugu horreeya ee xildhibaannada Golaha Wakiillada ee dhawaantan la soo doortay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa bayaan uu goordhaweyd soo saaray waxa uu isugu yeeray Golaha Wakiillada Cusub, arrintaas oo daba socotay go’aankii Maxkamadda […]
Comments Off on Madaxweynaha Somaliland oo shaaciyay kulanka ugu horreeyay ee Golaha Wakiilada.
Diyaaradaha Drones-ka ee Mareykanka ayaa duqeyn ka fuliyay deegaanno u dhexeeya degmada Bacaadweyne iyo Camaara ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku sugnaayeen koox ka tirsan Al Shabaab ,sida ay sheegtay dowladda. Duqeynta waxaa barbar socotay dagaal ka dhan ah kooxda oo ku lug lahaayeen militeriga Soomaaliya iyo ciidamada maamulka Galmudug. Dowladda waxay sheegtay in […]
Comments Off on Diyaaradaha Mareykanka oo duqeyn ka fuliyay deegaanno dhaca Mudug.
Muqdisho:-Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa soo gaaray magaalada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud oo si weyn loogu soo dhoweeyay . Guddoomiya ku-xigeenka ayaa markii uu soo gaaray Caabudwaaq waxa sii diiran ugu soo dhaweeyay Maamulka Degmada Caabudwaaq Wasiiro iyo Mudanayaal Ka tirsan Galmudug iyo qeybaha bulshada. Mudane Mahad […]
Comments Off on Ku-xigeenka labaad ee Gud. Baarlamaanka Soomaaliya oo Gaaray Caabudwaaq.
Dhuusamareeb:– Dowladda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay duqeyn maanta lala beegsaday Kooxda Argagixisada Al-shabaab,ciidamada Danab, SNA kuwa saaxibada Soomsaliya ayaa mar labaad duqeeyay maanta abaarahii 10:22 barqanimo inta u dhaxeysa magaalooyinka Bacaadweyn, Cammaara iyo Wasil nawaaxigooda ee maamul-gobaleedka Galmudug. Iyada oo duqeyntan lagu xoojinayey howlgalka Ciidanka Danab ay ka fulinayeen aaggaas, ayaysan wax dhib […]
Comments Off on Dowladda FS oo faafaahin ka bixisay duqeyntii maanta Al-Shabaab lala beegsaday.
Heshiis ku kacaya $7.4 Million oo ay kala saxiixdeen laba wasaaradood
Muqdisho:-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta goobjoog ka ahaa heshiis dayactir ah wadooyinka Puntland lagu sameynayo, kaas oo ku kacaya $7.4 Million, waxaana la sheegay in lacagtaas ay bixinayso Puntland . Heshiiska ayaa waxaa kala saxiixday Wasaaradda Maaliyadda oo bixinayso Lacagta iyo Wasaaradda Howlaha Guud iyo Gadiidka oo fulinaysa, waxaana u kala […]
Comments Off on Heshiis ku kacaya $7.4 Million oo ay kala saxiixdeen laba wasaaradood
Waxaa maalmihii u danbeeyey Tokyo ka socday ciyaaraha Olympics-ka oo lahaa noocyo kala duwan, haddaba waxa jirey orodyahanno Soomaali ah oo metelayey dalal kale. Waxaa se sannadkan ka maqan orodyahankii caanka ahaa ee Mo Farah, oo laba jeer oo hore ku guulaystay orodka olombikada ee 10000 ee Mitir. Waxaana sannadkan uu u seegayaa dhaawac soo […]
Comments Off on Maxada ka taqaan tirada Soomaalida ee kala meteleysay dalal kale ciyaaraha Olimbikada?
Maxaa la isku afgartay kulankii R/W Rooble, Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta mar kale xafiiskiisa ku wada qaabilay guddoomiyaha golaha waqtigu ka dhamaaday ee Aqalka Sare Cabdi Xaashi iyo ra’iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed, sida lagu shaaciyey qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Rooble. Ra’iisul Wasaare Rooble oo horay ula kulmay Cabdi […]
Comments Off on Maxaa la isku afgartay kulankii R/W Rooble, Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed?
Daawo: Cabdi Xaashi oo shaaciyey tallaabo ay qaadi doonaan haddii la qabto doorasho hal dhinac ah
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa ka digay in garabka Mahdi Guuleed ee doorashada kuraasta xildhibaanada gobollada Waqooyi ee Somaliland ay ku dhaqaaqan inay qabtaan doorasho, xili ay haystaan aqlabiyada guddiga. Cabdi Xaashi ayaa sheegay haddii uu garabka Mahdi Guuleed ku dhaqaaqo tallaabadaas ay dhinacooda qaban doonaan doorasho, maadama uu […]
Comments Off on Daawo: Cabdi Xaashi oo shaaciyey tallaabo ay qaadi doonaan haddii la qabto doorasho hal dhinac ah
Senator Xuseen oo faahfaahin ka bixiyey sababta looga reebay liiska musharaxiinta Aqalka Sare
Baydhabo (Caasimada Online) – Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, Gudoomiyaha Guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee labada Aqal ee Baarlamaanka, ayaa markii u horeysay faah-faahin ka bixiyay sababtii looga reebay liiska musharaxiinta ee uu shalay soo saaray madaxweyne Lafta-gareen. Waxa uu sheegay in liiskaas looga reebay kala aragti duwanaanshaha Madaxda joogta Villa Somalia, wuxuuna xusay […]
Comments Off on Senator Xuseen oo faahfaahin ka bixiyey sababta looga reebay liiska musharaxiinta Aqalka Sare
Page 1 of 1635123Next ›Last »